Rullaluistemadka Rubber, Mashiinka Mashiinka, Sifeeyaha Caarada - Awood
Jinan Power Rubber Roller Equipment Co., Ltd. waa soo saare xirfadle ah oo qalabka duuban caag casri ah oo isku daraya cilmi baarista iyo wax soo saarka.Akhri wax dheeraad ah
Alaabtayada ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin: Mashiinka Rinjiga Rullaluisteeda Birta ah, Mashiinka Mashiinka Mashiinka / Muraayadda, Mashiinka Mashiinka Cilindrical ee CNC, Mashiinka Mashiinka Mashiinka daboolaya, iwm. Akhri wax dheeraad ah
Markaad jeceshahay mid ka mid ah waxyaabahayaga soo socda markaad eegto liistada alaabtayada, fadlan si xor ah ula xiriir nala soo xiriir su'aalaha. Waxaad awoodi doontaa inaad noo soo dirto emayl ...Akhri wax dheeraad ah
In ka badan 20-kii sano ee la soo dhaafay, shirkaddu maahan oo kaliya inay tamarteeda oo dhan u hurto R&D iyo soo saarista qalabka, laakiin sidoo kale waxay si joogto ah u baareysaa tikniyoolajiyad wax soo saar kaamil ah.
Aaladda Aaladda Duub
Sanadihii la soo dhaafay, shirkadeena ayaa sidoo kale wax ku biirinaysa wax soo saarka caqliga leh ee warshadaha caaga ah. Habka Warshadaha 4.0 waxaa lagu dabaqi doonaa soosaarkayaga caagga ah mustaqbalka dhow.
Rubber rullaluistemadka CNC qiray High dhululubada ...
La aasaasay 1998
Jinan Power Rubber Roller Equipment Co., Ltd. waa soo saare xirfadle ah oo qalabka duuban caag casri ah oo isku daraya cilmi baarista iyo wax soo saarka. La aasaasay 1998, shirkadu waa saldhigga ugu weyn ee soo saarida qalab gaar ah oo rollers caag ah ee Shiinaha. In ka badan 20-kii sano ee la soo dhaafay, shirkaddu maahan oo kaliya inay tamarteeda oo dhan u hurto R&D iyo soo saarista qalabka, laakiin sidoo kale waxay si joogto ah u baareysaa tikniyoolajiyad wax soo saar kaamil ah.
Alaabtayada ugu muhiimsan oo ay ka mid yihiin: Mashiinka Mashiinka Rinjiga Rinjiga ah, Mashiinka Mashiinka Mashiinka / xoqida, Mashiinka Mashiinka Cilindrical ee CNC, Mashiinka Mashiinka daboolaya ee Rubber, Mashiinka Mashiinka Nadiifinta Qalabaynta, Qalabka Cabbiraadda Xirfadeed, iwm.
Jinan Qiangli Rubber Roller Equipment Co., Ltd. wuxuu ku takhasusay soo saarista qalabka duubista caagga, oo leh baaxad wax soo saar xoog leh. Iyada oo leh awood farsamo oo xoog leh iyo khibrad urursan, dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka ayaa si isku mid ah loogu aqoonsaday macaamiisha gudaha iyo dibaddaba. Badeecada waxaa laga iibiyay in ka badan 20 dal oo adduunka ah oo ay ku jiraan Mareykanka, Jarmalka, Kuuriyada Koofureed, Koonfur Afrika, iyo Brazil. Xagga tayada, tikniyoolajiyadda, iyo waayo aragnimada, Jinan Qiangli Rubber Roller Equipment Co., Ltd. wuxuu noqday hogaamiye warshadaha qalabka roolada caaga ah waana heer caalami.
Wax soo saarka ay shirkaddu soo saartay waxaa ka mid ah: mashiinka rooga ah ee rooga otomaatiga ah iyo mashiinka wax lagu daboolo, mashiinka mashiinka rooga ah ee gaarka ah, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka ah ee loo yaqaan 'CNC cylindrical grinder', qalabka baarista gaarka ah ee laser-ka ee loogu talagalay rullaluistemadka caagga ah iyo madaxa wax lagu shiido ee mashiinka caagga ah. Waxyaabaha kor ku xusan waxay ku guuleysteen sideed abaalmarino alaabeed oo heer qaran ama heer gobol ah iyo saddex abaalmarinno lagu gaarayo cilmi baarista sayniska ee Gobolka Shandong. Sannadkii 2002, badeecaddu waxay soo martay kormeerka Xarunta Tayada CCIB iyo ISO9001: shahaadada nidaamka tayada qaranka 2000. Sannadkii 2013, waxay heshay taageero gaar ah oo loogu talagalay cilmi-baarista sayniska iyo tikniyoolajiyadda ee degmada Shizhong, Jinan, waxayna bilaabeen inay aasaasaan xarun hawlgal teknoolojiyad injineernimada qalabka caaga ah. Adeegsiga qalabkayaga, shirkaduhu waxay si weyn u wanaajin karaan wax-soo-saarka wax soo saarka, waxay hagaajinayaan tayada wax soo saarka, kaydinta kharashyada, waxayna u keeni karaan faa'iidooyin dhaqaale oo ballaaran dadka isticmaala.
Shirkaddu waxay u hoggaansantaa mabda'a ah "macaamilka ugu horreeya", waxay soo saartay oo soo saartay noocyo kala duwan oo ah qalabka wax soo saarka rullaluistemadka caagga ah, kuwaas oo ku qancay kuna guulaystay ammaan ka yimid isticmaalayaasha. Shirkaddu waxay u abuuri doontaa faa iidooyin dhaqaale oo ballaaran unugyada isticmaaleyaasha oo leh muuqaal xirfadeed wanaagsan, adeeg tayo sare leh, tikniyoolajiyad heer sare ah, iyo qiime macquul ah.